Chelsea oo guul ka gaartay wadahadalada qandaraas kordhinta ee Antonio Rudiger | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Chelsea oo guul ka gaartay wadahadalada qandaraas kordhinta ee Antonio Rudiger
Antonio Rudiger ayaa lagu soo waramayaa inuu haatan doonayo inuu sii joogo Chelsea , iyadoo Blues ay horumar ka sameysay wadahadalada qandaraaska ee ay kula jirtay xiddiga heerka caalami ee dalka Jarmalka.
Qandaraaska daafaca dhexe ee Stamford Bridge ayaa dhacaya dhamaadka bisha June, Real Madrid , Manchester United iyo Paris Saint-Germain ayaa ka mid ah kooxaha lala xiriirinayo adeegiisa beeca xorta ah.
Rudiger ayaa la aaminsanaa in uu xagaagan doonayay in uu isaga tago kooxda chelsea si uu u raadiyo heshiis lacag badan ah laakiin sida laga soo xigtay wariyaha Bild Christian Falk xiddiga reer Germany ayaa haatan doonaya in uu la sii joogo kooxda haysata koobabka yurub.
Falk ayaa ku andacoonaya in labada dhinac ay hadda yeelanayaan wadahadallo wanaagsan, iyadoo Rudiger uu ka xumaaday dalabkii hore ee miiska la soo dhigay.
28-sano jirkaan ayaa qaab ciyaareed xoogan ku qaadanaya kooxda Chelsea intii lagu jiray xilli ciyaareedka 2021-22, isagoo u saftay 27 kulan tartamada oo dhan, isagoo ka qeyb qaatay labo gool iyo afar caawin.
Guud ahaan, Rudiger ayaa kasoo muuqday Blues 176 jeer tan iyo markii uu ka soo dhaqaaqay Roma 2017, wuxuuna ahaa ciyaaryahan muhiim u ah kooxda tan iyo imaatinka Thomas Tuchel.
Daawo: Kheyre oo loo diray dalab culis oo la xiriira ciidanka...
Muqdisho (Caasimada Online) – Wasiirkii hore Amniga ee Soomaaliya, Cabdirisaaq Cumar oo ka hadlay ciidamada loo qaaday dalka Eritrea ee la soo warinayo inay...
Mikel Arteta oo kawaramay wadahadalada qandaraaska Lacazette.
Laba dal oo Yurub ah oo la ogaaday inay si sharci-darro...
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp oo loo Magacaabay Tababarihii ugu...
”DOWLADA FASHILANTAY WAA CEEB, ADUUNKA WAXAAN UGU NECBAHAY WIXII SAAS YIRAAHDA”...
Roma oo dib u soo celinaysa xiisaha Granit Xhaka xagaagan
Madaxweynaha FFF ee Le Graet oo sheegay in Zidane la Wareegidoono...